आमा- बुबाको अनुहार हेर्ने, पिउलीको सपना अधुरै : RajdhaniDaily.com
Home Not-to-be-missed आमा- बुबाको अनुहार हेर्ने, पिउलीको सपना अधुरै
आमा- बुबाको अनुहार हेर्ने, पिउलीको सपना अधुरै
बझाङ । साईपाल गाँउपालिका वडा नम्बर ४, की पिउली कुमारी रोकाया अहिले १४ बर्ष लागिन् । उनी एक बर्षको हुँदा आँखा देख्थिन् । दुई बर्ष पुरा हुन केही दिनमात्र बाँकी हुँदा उनी झाडापखालले थला परिन । नजीकै स्वास्थ्य चौकी समेत नभएको र घरको आर्थिक अवस्था समेत निकै नाजुक भएका कारण उनका अभिभावकले उनको उपचार गर्न सकेनन् ।
करिब २ महिना सम्म उनी थला परिन् । उनका उभिभावकहरुले छोरी बाँच्दैन भन्दै आश समेत मारि सकेका थिए । धन्न जेनतेन बाँचिन् । उनलाई राम्रो भयो । पछि गएर आँखा देख्न नसक्ने भईन् । छोरी आँखा देख्न नसक्ने भएपछि कसैले रतन्धो लागेको र कसैले देवि देउता लागेर यस्तो भएको भन्दै कुराहरु काट्न थाले ।
उनका परिवारका सदस्य पनि धामीझाँक्री तर्फ नै बढी लागे । त्यो उनको परिवारको बाध्यता थियो । घर छोडेर बाहिर निस्कन र छोरीको उपचार गराउनका लागि आर्थिक अवस्था समेत थिएन । गाँउले तथा छिमेकीको घरमा काम गरेर छोराछोरी र आफ्नो परिवारको पेट पाल्नु पर्ने बाध्यता उनको परिवारको थियो । जसका कारणले उनको उपचार गर्न असम्भव भएन र अहिले सम्म अन्धकारमय जीवन विताउँदै आएकी छिन् ।
गाँउका दाजु भाई दीदी बहीनी र छिमेकी संगै गाउँ बाहिरबाट जाने जतिपनि यक्तीहरु छन् उनीहरुले छोरीको आँखाको उपचार गराए राम्रो हुने र छोरी देख्न सक्ने भन्दै सल्लाह दिदै आएकाछन् । गाउँपालिका भै सकेपछि गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर धामीले आश्वसन दिएपछि उनका बुबा गंगराम रोकायाले छोरीको आँखाको उपचार गराउन कैलालीको गेटा आँखा अस्पतालमा लगे ।
गाँउपालिकाले २५ हजार सहयोग समेत गरेको रोकायाले बताए । उनले भने पिउलीको दुबै आँखाको सल्यक्रिया २०७५ पौष महिनामा गरिएको थियो । एक महिनापछि डाक्टरले फेरी चेकजाँच गर्न गेटा आँखा अस्पताल कैलालीमा अनिवार्य आउनु भनेको थियो । गाउँमा माघ महिनामा बाक्लो हिउँपात भयो । आफुसँग टिकट काट्न समेत पैसा नभएका कारण छोरीलाई लिएर उपचार गर्न जान नसकेको उनले बताए ।
अहिले गाउँकै युवाहरु मिलेर सदरमुकाम चैनपुरमा चन्दा संकलन गर्दै आएका छन् । रोकायाले त्यही चन्दा संकलन गरेको रकममा आश गर्दै सोही रकम लिएर छोरीको उपचार गराउन जाने सोच बनाएको बताए । छोरीले बुबा म आँखा देख्छु होला नि है ? कस्तो छ बुबा बाहिरको संसार , अनि आमा,बुबा, दाजुभाई दीदीबहीनीको अनुहार कस्तो छ ? भनेर सोधेको सोधेकै छ । त्यसको जबाफ मसंग छैन र म केही पनि बोल्न सक्दिन । उनले आफ्नो पाखो जमिन भएका कारण विक्री गर्न समेत नमिल्ने बताए ।
१२ महिना काम गरेर उक्त खेतबारीबाट दुई महिना समेत राम्रोसंग खान नपुग्ने बताउँदै छोरीको आँखाको उपचारका लागि भन्दै कसैले २ सय कसैले एक हजार कसैले ५ सय गर्दै ६० हजार जम्मा भएको चन्दा संकलन गर्न लागेका छिमेकी राम बहादुर बोहराले बताए । सबैभन्दा बढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर धामीले ब्यक्तीगत दश हजार सहयोग गरेको छ । संकलन भएको रकम पनि अभाव हुने भएका कारण छोरीको उपचारमा बाधा पुग्ने भन्दै उनले सम्पुर्ण देश विदेशमा रहेका नेपालीहरु मझ सहयोगको अपिल समेत गरेका छन् ।
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि ३२ अर्ब भन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना...
काठमाडाैं । एसइईको नतिजा साउन दोस्रो साता, असार २० भित्र आन्तरिक मूल्याङ्कन पठाउन विद्यालयलाई निर्देशन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा सहभागी हुन आवेदन दिने...
३० खेलाडी चुनिए काठमाडौं । नेपाल भलिबल संघले एसियन च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि राष्ट्रिय नेपाली महिला भलिबलको प्रारम्भिक टोली छनोट गरिएको छ । पहिलो चरणमा संघले...
कोरोना कहर : सुदूरपश्चिममा युवा समुह बढी संक्रमित
प्रदेश ७ Sushila Bishwokarma - June 14, 2020 0
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट युवा समुह बढी संक्रमित भएको देखिन्छ । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिएको विवरण अनुसार कुल संक्रमितको...
काठमाडौं आसपासका डाँडा पनि भरिए हिउँले
Exclusive Dhruba Lamsal - February 7, 2021 0
काठमाडौं । दुई दिनदेखि मुलुकभरको मौसममा बदली भइरहेको छ । केही स्थानमा वर्षा र हिमपात भएको छ भने तराईका जिल्लामा शीतलहर बढेको छ । मुलुकभर...
अन्ततः फुट्यो नेकपा
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मंगलबार छुट्टाछुट्टै स्थानमा बसेको दुई समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको फरक फरक निर्णयसँगै पार्टी विभाजन भएको छ...
संघीय र प्रदेशबाट अपेक्षाअनुसारको सहयोग प्राप्त भएको छैन : अमोद चौधरी
अन्तर्वार्ता Dhruba Lamsal - August 30, 2020 0
तपाइँको स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ? कोरोना संक्रमणको सन्दर्भमा जिल्लाकै स्थिति भयावह बन्दै गइरहेको हामी सबैलाई अवगत नै छ । यद्यपि, बारागढी...
कोरोना भाइरसका बिरामी भनिएका व्यक्ति स्वस्थ रहेको पुष्टि
प्रदेश १ Sushila Bishwokarma - March 19, 2020 0
खोटाङ । जिल्लामा केही दिनदेखि कोरोना भाइरसका बिरामी रहेको भनिएका व्यक्ति स्वस्थ रहेको पुष्टि भएको छ । चीनबाट फर्किएका बिरामी रहेको भनेर गाउँमा अनावश्यक...
समाज Dhruba Lamsal - October 22, 2020 0
काठमाडौं । रिपुमर्दिनी सैनिक माध्यमिक विद्यालय बाँसबारीले ब्रिटिस काउन्सिल नेपालद्वारा आयोजित पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय स्कुल अवार्ड जित्न सफल भएको छ । साथै अर्को विधा ‘उत्कृष्ट...
कस्तो हुनुपर्छ क्वारेन्टाइन ?
भर्खरै Dhruba Lamsal - August 25, 2020 0
पछिल्लो तथ्याकं हेर्ने हो भने देशभर ११ हजार २ सय ७५ जना क्वारेन्टाइन बसेका छन् । अहिले भएका अधिकांश क्वारेन्टाइनले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्...
प्रदेश २ Dhruba Lamsal - January 5, 2021 0
काँग्रेसद्वारा पार्टी विधानका केही दफा निलम्बन
Not-to-be-missed Prem Shyangtan - February 12, 2020 0
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले पार्टीको आगामी अधिवेशन र महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि मात्र लागू हुने गरी पार्टी विधानका केही दफा निलम्बन गरेको छ ।...
काठमाडाै‌ । मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख २४ गतेको निर्णयअनुसार आगामी आइतबारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका देशभरका शाखा खुल्ने भएका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था,...
नवराज पहाडी - June 16, 2021